June 2020 - Boga Wise Man
Dookh iyo Doorasho – Qaybtii 5aad
Qaybtii 5aad. Deyr ma uu rabin in uu Ikraan dib ula xidhiidho isagoo diidan inay wixii hore u dhexmaray dib usoo noqdaan. Balse qof kale oo uu u maro ayuu garan waayay, muddona way kasoo wareegtay wakhtigii ay is dagaaleen. Koley wey weynaatay waanay iska illowday wixii dhacay ayuu is tusay. Layaab kumay noqon inay […]
Dookh iyo Doorasho – Qaybtii 4aad.
Maygaag cabbaar ayuu sugay inta Deyr si fiican uga boganayo qoraaladii qiimeynta ee laptop-ka. Bunkiisa ayuu aayar iska cabay isagoo raba inaanu degdegin oo saaxiibkii warka ka sugo. Maygaag deganaanta uma dhalan wuxuuse ahaa mid is-bara deganaanshiiyaha iyo inuu wax sugo. Deyr cabbaar ayuu ku dul fikiray isagoo raba inaanu sheekada soo socota dhex gelin. […]
Dana – Qaybaha Koobaad iyo Labaad.
Illaa soddon daqiiqo ka hor ayuu dhulku madoobaaday. Isla wakhtigaas cadceedu dhacday ayaanu roobkii shuuxa ahaa ee illaa duhurkii da’ayay qaaday. Waa fiid degan. Waxa dhacaysa neecaw aan qaboobayn. Xiliguna waa xagaa. Waa Hargeysa iyo sanadkii 2011-kii. Dad badani magaalada ma socdaan oo roobkaa laga wada dhacay. Gawaadhiduna si qunyar ah ayay u socdaan oo […]